थाहा खबर: युवराज नयाँघरे
रारा बोली : 'हाम्लाई क्यै नाइँ' (नियात्रा )
'यी सामान लोग्ने बोक्छन्। हाम्लाई क्यै नाइँ!' ताल्चा विमानस्थलमा भारी बोक्न नपाएकोमा आइमाईहरू रिसाए। केटाहरू भारी बोकेर लम्केका थिए लुइँलुइँ। केटाहरूलाई 'लोग्ने' भनेका थिए ती भरिया आइमाईले। हामीसँग अरू तीन केटा थपिए- रमेश रोकाय...
निधारका मुजामा बितेका वर्षहरूको खित्का। त्यो अनुहारमा धेरै-धेरै कुराको तह। आँखाले अटेसमटेस हेरेका दृश्यहरू। कानले सुनेका अथाह शब्दहरू। छातीले धड्किएका अपार अनुभूतिहरू। यो बूढो मान्छे। निधारमा, गालामा, कञ्चटमा खुम्चेको मासु। नाकमा मोटो चस्मा छ। उसले खेले...
| असोज ७, २०७३
किनारमा छु रगते आहालको! सधैँ त काठमाडौँ छोडेर घरै पुग्थेँ- दशैँ मान्न। यसपालि खै के लाग्यो, यो उपत्यका छोड्न मानेन मन। थच्चिएँ यै उकुसमुकुसमा। लाग्यो, यो कान्तिपुरको दशैँ हेरौँ! यसको पोल्टामा थच्चिनेका दशैँमा मिस्सिऊँ र मनाऊँ आँफै पनि। नौरथाको अन्तिम द...